Boky torolàlana momba ny orinasa: rafitra sy torohevitra (I) | Famoronana an-tserasera
Boky torolàlana momba ny orinasa: rafitra sy torohevitra (I)
Tao amin'ny lahatsoratra teo aloha dia niresaka ny maha-zava-dehibe ny boky torolàlana momba ny orinasa ary nanome ny tolo-kevitra izahay mba hampidirina an'io boky io ho toy ny antontan-taratasy mifandraika amin'ny asa novolavolainay ho an'ireo orinasa mila ny serivisinay.
Misy lafiny maromaro tokony ho raisinao. Ny bokintsika dia hitaky vitsivitsy specs ary akora ilaina ilaina mba hahomby. Ny sasany amin'izy ireo dia ireto manaraka ireto:
Taolana tsy maintsy hatsangana na firafitra handaminana ny mombamomba antsika ary tokony ho azo aleha sy hilamina araka izay azo atao izany.
Ny toetra ofisialy an'io dia tokony hasongadina ary ny adidy hanaraka ny fenitra napetraka sy voafaritra.
Miresaka momba ny antontan-taratasy tsy miankina iray izahay. Ity dia iray amin'ireo fepetra arahana izay tokony holazaina tsara. Ny fitondrana maharitra dia tsy maintsy ferana ho an'ny ekipa matihanina anatiny ao amin'ny orinasa voalaza. Mazava ho azy, tsy azo avoaka amin'ny haino aman-jery rehetra izany, mainka ny orinasa rehetra, indrindra raha orinasa ao amin'io sehatra io ihany.
Ny famolavolana ny bokintsika dia manan-danja toy ny famolavolana ny sary famantarana sy ny sary resahina. Amin'ny maha singa iray hafa amin'ny maha-izy azy ny maha izy azy ny orinasantsika, dia tsy maintsy asehony lafin-javatra mifanaraka amin'izany. Midika izany fa ny lokon'ny orinasa sy ny endritsoratra dia tsy maintsy mitovy amin'ireo hita amin'ny sarin'ny orinasanay.
Ity boky torolalana ity dia farafaharatsiny mba hisy ireto fizarana manaraka ireto ary ny tsirairay amin'izy ireo dia hofakafakaina amin'ny fomba lalindalina kokoa amin'ireo lahatsoratra mifandimby. Amin'izao fotoana izao dia avelako ho anao ny rafitra tokony hananany:
Index: Tena ilaina izany satria hanampy ny mpamaky hahita ny vaovao tadiavin'izy ireo amin'ny fomba haingana sy mailaka.
Torolàlana: Miankina amin'ny haavon'ny fahasarotana ananan'ny antontan-taratasinay sy ny fomba fandaminay ireo fizarana, io fizarana io dia ho zava-dehibe kokoa na tsy dia lehibe.
Ny marika: Fizarana iray dia tokony hatsangana mba hampatsiahy sy hanoritana ny filozofia sy ny soatoavina mitarika ny orinasa, ny fiaviany, ny fampisehoana ny orinasa ary koa ny mombamomba ireo mpanorina.
Fanamboarana marika: Fanadihadiana henjana no hatao amin'ny fananganana ny singa tsirairay mandrafitra ny maha-izy azy ny orinasa. Avy amin'ny endritsoratra, logo, katalaogin'ny loharanon-karena orinasa, fomba fanao voarara ...
Fampiharana marika: Amin'ity fizarana ity dia haneho ny mombamomba ny marika izahay amin'ny mety ho mpanohana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Boky torolàlana momba ny orinasa: rafitra sy torohevitra (I)
Rafitra metaly dia hoy izy:
Rahalahy manual tsara indrindra, mianatra betsaka momba ny famolavolana avy aminao aho
Mamaly ireo firafitry ny metaly
Boky torolàlana momba ny orinasa: Torolàlana sy rafitra (II)
Teny famolavolana 50 ilainao ho re alohan'ny hahafatesanao